Shiinaha Qabsada Strongman warshad bacda ciida iyo alaableyda | Feiqing
Gacanteenna sandbag sandwich-ka waxaa loo sameeyaa iyadoo lagu saleynayo bacda adag, waxaan hagaajineynaa naqshadeynta si loogu fududaado. Naqshaddan cusub waxay ka dhigeysaa gacan qabashada bacda ciida xoog leh iyadoo xoogaa wax ku qabsaneysa shaqooyinka korontada. Si fudud ayaad u xamili kartaa, kor u qaadi kartaa, u dhaqaajin kartaa bacda adag ee sandbagga ah Boorsooyinka waa la faaruqi karaa ka dibna dib ayaa looga buuxin karaa goob kale oo jimicsi, beer, jardiinno, iwm.
Boorsooyinka Sandle ee loo yaqaan 'Handle Strongman Sandbags' ayaa lagu heli karaa cabirro 50lb-150lb ah, waad dooran kartaa cabbirka sida aad u baahan tahay.Waxaa laga sameeyay 1050D Cordura 100% nylon material, YKK zipper. Sanduuq kasta oo Sandbag ah wuxuu leeyahay boorso buuxiye gaar ah oo leh jiinyeer dheeri ah iyo xiridda-iyo-loop-hubinta in walxaha buuxiyuhu uu si buuxda u xakameynayo inta aad ka shaqeyneyso nidaamkaaga. Furitaanka qolof bacda adag ee adag oo leh jiinyeer YKK, waxay kahortagi kartaa bacda inay qarxdo.
Fadlan Ogsoonow: Miisaanka culus ee Bacda 'Strongman Bag' waxay kuxirantahay cufnaanta iyo cabirka warbaahinta la adeegsanayo. Warbaahinta qaar ayaa sababi kara culeyska guud ee bacda inuu ka weynaado ama ka yaraado culeyska la saadaaliyay. Dabeecadda dharka iyo isticmaalka tooska ah, bacda 'Strongman' ayaa laga yaabaa inay ku faafaan waqti ka dib isticmaalka. Intaa waxaa sii dheer, boorsooyinkan lama buuxin.
5.Boorsada Boorsada Gaarka ah.
Hore: Blocks Wood Jerk
Xiga: Bacda ciidda culus-A
Tababaro Qabashada Bacda Ciida